saturngod, Author at Saturngod - Page 191 of 193
Posted on Updated February 3, 2007 by saturngod
Can use Zawgyi-one Font.Zip ဖြည်လိုက်ပါ။“%HOMEPATH%\_Local Settings\_Application Data\_Google\_Google Talk\_themes\_user\_chat တွင် Past လုပ်လိုက်ပါ။ chat Folder မရှိသေးက create လုပ်ပြီး past လုပ်ပါ။ Gtalk -> Setting -> General -> Change Font တွင် Zawgyi-one ဟုပြောင်းပါ။ MMorkutPicture Theme
Posted on Updated February 2, 2007 by saturngod
Can use Zawgyi-one Font.Zip ဖြည်လိုက်ပါ။“%HOMEPATH%\_Local Settings\_Application Data\_Google\_Google Talk\_themes\_user\_chat တွင် Past လုပ်လိုက်ပါ။ chat Folder မရှိသေးက create လုပ်ပြီး past လုပ်ပါ။ Gtalk -> Setting -> General -> Change Font တွင် Zawgyi-one ဟုပြောင်းပါ။ MMBubble Theme
Posted on Updated January 29, 2007 by saturngod
UCSY ကျောင်းသားများနှင့် Programmer များသို့
Computer နယ်ထဲမှာ ဝင်ရောက်ဖို့ ဘယ်အချိန်ကဆုံးဖြတ်မိတာလဲ ? လူငယ်တွေက ဘာကြောင့် Computer ကို ဘယ်အချိန်မှာ စဝင်စားတာလဲ ? ကျွန်တော်တွေးမိတယ်ဗျာ….. ကျွန်တော်ကရော ဘာဖြစ်လို့ Computer ကို ဒီလောက်သဘောကျနေတာလဲ…ကျွန်တော့် Blog ကို ဖတ်တဲ့ သူတွေကော စဉ်းစားမိရဲ့လားတော့ မသိဘူးဗျ…ကျွန်တော် စဉ်းစားမိတာလေးကတော့…… ၁၀ တန်းအောင်ရင် လူငယ်တွေ ဘာလုပ်မလဲ? အဲဒီ အချိန်မှာ အိမ်က လူကြီးတွေက လူငယ်တွေ လေလွင့် ပျက်စီးမှာ စိုးရိမ်ကြတယ်…. သင်တန်းတစ်ခု တက်ဖို့ပြောရော…လူငယ်တွေကလည်း နားပူလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်…စိတ်ဝင်စားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်…Diploma လေးရဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်…. စာမသင်ရင် မနေနိုင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်….အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် သင်တန်းတက်ဖြစ်ကြတယ်….အဲဒီ အချိန်မှာ ဘယ်သင်တန်းတက်မလဲ…. လူငယ်ဆိုတာ သိတဲ့ အတိုင်းပဲ popular ဖြစ်တာကို တက်ချင်ကြတယ်… မိန်းကလေးချောချာ ရှိနိုင်မယ်လို့ထင်တဲ့ နေရာကို […]
ခဲတံနဲ့ ကျွန်တော် သူငယ်ချင်းဆွဲထားပြီး ကျွန်တော် အရောင်ခြယ်ထားတာပါ….
မြန်မာနိုင်ငံက Programmer အဆင့်က သန့်ရှင်းရေးသမားလောက်တောင် အဆင့်မရှိဘူးလားဗျာ….
Posted on Updated January 19, 2007 by saturngod
ကျွန်တော်ပြောချင်နေတာ တော်တော်လေးကြာပြီဗျာ….ဘာလဲဗျာ….Computer ဘွဲ့က သုံးစားမရဘူးလားဗျာ….သုံးစားမရရင်နေ…..ဘွဲ့ရဲ့ သိက္ခာလေးကို တော့ ထောက်အုံးပေါ့ဗျာ… ဘွဲ့က အလကားနေရင်းရလာတ မဟုတ်ဘူးဗျ…၃ နှစ်အချိန်ကုန် ပြီးရလာတာဗျ… ဘွဲ့ရပြီး အလုပ်ဝင်တော့မယ်ဆိုရင် လောကကြီးကစတင် စိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းလာမှာ အမှန်ပဲ…ကျောင်းတုန်းကနဲ့ မတူတော့ဘူးဗျ….Computer ကဘွဲ့ရပြီးလို့ programmer လေးဝင်လုပ်ရင် ဘယ်လောက်ရမယ်ထင်နေလဲ…. Singapore ကလို လခကောင်းမယ်ထင်နေလား…. ထင်မိရင်တော့ အဲဒီ အတွေးကို မြောင်းထဲပစ်လိုက်တော့…. ဒါက ရန်ကုန်… Singapore မဟုတ်ဘူး…. စဝင်ခါစ ဆိုရင်တော့ လူငယ်တွေက ပညာသင်ချင်တာရယ် အတွေ့အကြုံရချင်လို့ရယ်…..ဒါကြောင့် အလုပ်လုပ်နေရတာ…. အဲဒါကို လုပ်ငန်းရှင်တွေက သိတော့ သန့်ရှင်းရေးသမားလောက်တောင် လခမပေးဘူးဗျ…. ရေးခိုင်းတာကလည်း အသေအကြေ… ပညာနဲ့ အတွေ့အကြုံအတွက် ကိုယ့်ဘ၀ ၂ နှစ် ၃နှစ်လောက်ကို အငတ်ခံပြီး ရင်းနေရတာဖြစ်နေပြီဗျ….စရတဲ့ လခက […]
ကိုယ်ပိုင် Web မှာ မြန်မာ keyboard built-in ထည့်လိုလျှင်
Posted on Updated January 16, 2007 by saturngod
Posted on Updated January 14, 2007 by saturngod
Adobe Acrobat 8 Professional ထွက်ပြီဗျ….GUI ပိုင်းကတော့ တော်တော်လေးပြောင်းလဲထားတယ်ဗျ….ပိုပြီးတော့ smart ဖြစ်သွားတယ်…နောက်ပြီး ms word ကိုလေး တိုက်ရိုက် export လုပ်လို့ရတဲ့အပြင် တခြား export file တွေလဲရလာတာတွေ့ရတယ်…နောက်ပြီး PDF File တွေကို merge လုပ်လို့ရလာတယ်.. အခု ရန်ကုန် ကဆိုင်တွေမှာ ဝယ်လို့ရနေပါပြီ…တစ်ခွေထဲပါ….သွင်းရတာလည်းမြန်ပါတယ်..နောက်ပြီး အခွေထဲမှာ Adobe Reader 8 တောင်ပါလိုက်သေးတယ်..